Media controls us — Steemkr
Media controls us
babysister42 in steemit
ယခုမူ ပျင်းရိ၍အားမထုတ်ခဲ့သောကြောင့် သူဌေးအဖြစ်မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ။သောတာပန်၊သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ မဖြစ်ကြဘဲ မဂ်ချမ်းသာ၊ ဖိုလ်ချမ်းသာတို့မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ-ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဤမိန့်တော်မူချက်သည် ပျင်းရိခြင်း၏ အကျိုးနှင့်အပြစ်ကို ကောင်းစွာ သာဓSTEEMITကပြလျက်ရှိသည်။ဗုဒ္ဓရားရှင်သည်လူအများ ကျင့်သုံးလိုက်နာရန် အဆုံးအမပေါင်းများစွာကို ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ယင်းတို့တွင် ပျင်းရိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဟောကြားသည်မှာ အထူးသတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကပျင်းရိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ (၁)ပျင်းရိ၍အားမထုတ်ဘဲနေသောသူ။ (၂)မပျင်းရိဘဲ အားထုတ်၍နေသောသူဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ခွဲခြားပြသည်။ ထိုသို့ ခွဲခြားပြီးလျှင်အကျိုးအပြစ်များကိုလည်းဖွင့်ဆိုပြသည် ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါက မဟာဓနသူဌေးသားနဲ ဇနီးမယားတို့ ရှိကြသည်။သူတို့သည် မိဘတို့၏ အမွေအနှစ်များကိုရ၍ ကြွယ်ဝချမ်းသာကြသော်လည်း အားထုတ်ခြင်းမရှိ၊ပျင်းရိသောကြောင့်စီးပွားများပျက်၍ သူတောင်းစားဘ၀သို့ရောက်ခဲ့ကြရသည်။တနေ့သောအခါဆွမ်းစားဇရပ်တခုတွင် မြတ်စွာဘုရားသည် သံဃာတော်များနဲ့အတူ ဆွမ်းSTEEMITစားနေတော်မူ၏။ထိုစဉ်တံခါးဝ၌ ခွက်လက်စွဲကာ ရပ်နေသော ထိုသူဌေးသား လင်မယားကိုမြင်၍ ပြုံးတော်မူ၏။ပြုံးတော်မူရခြင်းအကြောင်းကိုအရှင်အာနန္ဒာ မေးမြန်းလျှောက်ထားသောအခါဘုရားရှင်က-ငါသည သူဌေးသားကိုမြင်၍ပြုံးရသည်။ဤသူဌေးသားနှင့် ဇနီးမယားတို့သည် လောကနှင့် ဓမ္မ နှစ်ဌာနတို့၌ ပျင်းရိ၍ အားထုတ်မှုမရှိသောကြောင့် လောကချမ်းသာ၊ ဓမ္မချမ်းသာ နှစ်မျိုးလုံးတို့မှ ဆုတ်ယုတ်သွားရလေပြီ-ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။
ဘုရားရှင်က ဆက်လက်၍ဤသူဌေးသားနှင့် ဇနီးမယာ့းသည် လောကဘက်၌ပထမအရွယ်တွင် စီးပွားဥစ္စာ ရှာကြသော် ပထမတန်းစားသူဌေးများ ဖြစ်နိုင်ကြသည်။ ဓမ္မဘက်က တရားအားထုတ်ကြလျှင် သူဌေးသားက ရဟန္တာ၊ ဇနီးမယားက အနာဂါမ် ဖြစ်နိုင်ကြပေသည်-ဟု မိန့်တော်မူသည်။ထို့နောက် ဘုရားရှင်က-ဤသူဌေးသားနှင့် ဇနီးမယားတို့သည် ဒုတိယအရွယ်တွင် စီးပွားဥစ္စာရှာကြသော် ဒုတိယတန်းစား သူဌေားးဖြစ်နိုင်ကြပေသည်။ ဓမ္မဘက်က တရားအားထုတ်ကြသော် သူဌေးသားက အနာဂါမ်၊ ဇနီးမယားကFACEBOOK သကဒါဂါမ် ဖြစ်နိုင်ကြပေသည်။အကယ်၍ တတိယအရွယ်တွင် စီးပွားဥစ္စာရှာကြသော် တတိယတန်းစား သူဌေးများဖြစ်နိုင်ကြပေသည်။ ဓမ္မဘက်က တရားအားထုတ်ကြလျှင်မူ သူဌေးသားက သကဒါဂါမ်၊ဇနီးမယားက သောတာပန် ဖြစ်နိုင်ကြပေသည်။ယခုမူ ပျင်း၍အားမထုတ်ခဲ့သောကြောင့် သူဌေးအဖြစ်ယခုမူ ပျင်းရိ၍အားမထုတ်ခဲ့သောကြောင့် သူဌေးအဖြစ်မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ။သောတာပန်၊သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ မဖြစ်ကြဘဲ မဂ်ချမ်းသာ၊ ဖိုလ်ချမ်းသာတို့မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ-ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဤမိန့်တော်မူချက်သည် ပျင်းရိခြင်း၏
အကျိုးနှင့်အပြစ်ကို ကောင်းစွာ သာဓကပြလျက်ရှိသည်။မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ။သောတာပန်၊သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ မဖြစ်ကြဘဲ မဂ်ချမ်းသာ၊ ဖိုလ်ချမ်းသာတို့မှလည်း ဆုတ်ယုတ်သွားကြပေပြီ-ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဤမိန့်တော်မူချက်သည် ပျင်းရိခြင်း၏ အကျိုးနှင့်အပြစ်ကို ကောင်းစွာ သာဓကပြလျက်ရှိသည်။လောကနီတိကျမ်းဆရာများကလည်း ပျင်းရိ၍ အားမထုတ်ဘဲနေသူတို့၏ဆုတ်ယုတ်သွားပုံကို ရေးသားဖွင့်ပြကြသည်။ * ပျင်းရိသူသည် အတတ်ပညာ မတတ်၊ အတတ်ပညာ မရှိသူအား စီးပွားဥစ္စာ မရနိုင်၊ စီးပွားဥစ္စာ မရှိသူအား မိတ်ဆွေကောင်းမရနိုင်၊ မိတ်ဆွေေYOUTUBEကာင်း မရှိသူအား ချမ်းသာသုခ မရနိုင်၊ ချမ်းသာသုခ မရှိသူအားကောင်းမှုမပြုနိုင်၊ ကောင်းမှုမရှိသောသူအားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်-ဟူ၍ လောကဓမ္မ နှစ်ဌာနလုံး၌ ဆုတ်ယုတ်သွားပုံကို ဖွင့်ဆိုပြထားသည်။ဤကား ကျွန်ုပ်တို့ စာစောင်က ဦးထိပ်ထားသော သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော်ကြီး၏ဓမ္မဆောင်းပါးတပုဒ်တွင် ရေးသားချက်ဖြစ်သည်။မြတ်မင်္ဂလာစာစောင်တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိလှသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်ဆင့်တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
သေရာဌာနကိုပြေးလာတာကဖြင့် သေချာတယ် . (သေချာပါတယ် ဘုရား)။ဟိုမြို့ ရောက်လဲ သေခါနီးတာပဲ (မှန်လှပါရား) ဟိုမြို့ ကလဲ ဒီမြို့  ဆက်ပြေးပြန်တော့ရော(သေခါနီးတာပါဘုရား)။ဒါဖြင့် သုသာန်အရောက် ပြေးနေတဲ့လမ်းပဲ မဆိုနိုင်ကြဘူးလားSTEEMIT (ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား)။အဲဒီတော့သုသာန်အရောက် ပြေးနေတဲ့လမ်းပဲ လို့ ဒကာဒကာမတွေးဖြတ်ချက်ချနေတော့ ယုတ်စွအဆုံးပြောကြပါစို့၊ တရားနာနေတာ တောင်မှသုသာန်သွားရင်း တရားနာနေတာလို့ ဆရာဘုန်းကြီးက ဆုံးမတယ်..(မှန်လှပါဘုရား)။ဘုရားက ဆုံးမတယ် (မှန်လှပါဘုရား)။ထိုင်,စ ထက် အခု သုသာန်နဲ့ နီးတယ်ဆိုတာက မသေချာဘူးလား.. (သေချာပါတယ်ဘုရား) ထိုင်, စ ထက်သေခါနီးတယ် ဆိုတာကရော TWITTER(သေချာပါတယ်ဘုရား)။ဒါဖြင့်ဦးလှဘူးတို့၊ ဒကာကြွယ်တို့၊ ဒကာသိုက်တို့၊ ကျုပ်တို့သည်ကား ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ထိုင်နေလဲ ဒီနေရာဌာနကိုတော့အရောက်သွားတာပဲ (သွားတာပါပဲဘုရား) ထိုင်ရင်းသွားတယ်။အိပ်နေပြန်တော့ (အိပ်ရင်းသွားပါ တယ်ဘုရား)။စားနေပြန်တော့(စားရင်းသွားပါတ ယ်ဘုရား)။ပြောနေပြန်တော့ (ပြောရင်းသွားပါတယ်ဘုရား)။သြော်..ဒါဖြင့် ဒကာဒကာမတို့ ဒီ့ပြင်ဟာတွေကဖြ င့် လွဲတယ်၊ ချော်တယ် ရှိသေးတယ်နော်(မှန်လှပါဘုရား) တို့ သုသာန်သွားတဲ့ အလုပ်ကတော့ လွဲတယ်၊ ချော်တယ်လို့ မရှိတော့ပါဘူး . (မရှိပါဘူးဘုရား)နီးကပ် နီးကပ် သွားတာသေချာတော့တာပဲ .(သေချာပါတယ်ဘုရား) မဆိုနိုင်ဘူးလား ..(ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား)။
အဲဒါတွေ သေသေချာချာဒကာဒကာမတွေက ဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားလိုက်တော့မှ သြော် တို့သည်ကားလို့ဆိုရင်တစ်ဘ၀လဲ ဒီလမ်းပဲ ပြေးရပြန်တာပဲ၊ နောက် ဘ၀ ရပြန်တော့ရော..(ဒီလမ်းပဲပြေးရတာပါဘုရား) အင်းနောက်အနာဂတ် တတိယဘ၀ ရောက်ပြန်တော့ရော. (ဒီလမ်းပြေးရတာပါဘုရား)။ဒါဖြင့် ဒီလမ်းပြေးတဲ့အလုပ်ဟာဖြင့် ကျုပ်တို့သည် ၀ဋ်သမားမို့ပြေးရတဲ့ အလုပ်ပဲလို့ မှတ်ပေတော့ (မှန်လှပါဘုရား)။၀ဋ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မို့ ဒီလမ်းချည်းပြေး ရတာ. (ပြေးရပါတယ်ဘုရား) ၀ဋ်ကျွတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလမ်းမပြေးပါဘူး.(မပြေးပါဘုရား)။အဲဒါကြောင့် ဒကာဒကာမတို့အားလုံးက ညည်းနေကြတာက အိုပြီ၊ သေရချည် သေးရဲ့  ..(မှန်လှပါ)တော်တော်ကြာ နောက်ဘ၀ကျတော့အိုပြန်ပြီ၊ သေရချည် သေးရဲ့. (မှန်လှပါ)။ဒါသာညည်းလုံးတွေ ထုတ်နေကြတာပဲ ဒကာဒMEDIAကာမတို့၊ လမ်းခွဲကိုမရှာဘူး .(မရှာပါဘုရား) မရှာတာကလဲဦးလှဘူးတို့၊ ဒကာကြွယ်တို့က စဉ်းစားရမယ်၊ သြော်.မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖို့အရေးဟာ အတော်ကွာဝေးတာပါလားဆိုတာပေါ် လာတယ်၊ မပေါ်လာဘူးလား (ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား)။ကိုင်း..ဒါဖြင့် ဒကာဒကာမတို့ သေရမှာကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ချည်းလို့ဇာဏု သောနိ ပုဏ္ဏားက ပြောတော့ ဘုရားသခင်ကိုယ်ေ STEEMတ်ာမြတ်ကြီးက ကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးမကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုး ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ် .(ပြောပါတယ်ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သေရွာသွားတဲ့လူချင်းတူပေမယ့် လဲ ကြောက်သွား,သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ..(မှန်လှပါ) မကြောက်ဘဲနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ (မှန်လှပါ) နှစ်မျိုး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပြီ (ရှင်းသွားပါပြီ ဘုရား)။ဒါဖြင့် ဘုရားတဲ့၊ တပည့်တော်ယူထားတ အယူကတစ်ယူတည်းဖြစ်နေတော့ အTWITTERရှင်ဘုရားကမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သေရမှာ မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေး တယ်ဆိုတာရှင်းပြစမ်းပါဦး (မှန်လှပါ) မမေးသင့်ဘူးလား ..(မေးသင့်ပါတယ်ဘုရား)။အေး ဒီတရားကိုစ,ပြီးသကာလ ဟောရတာ ကာဒကာမတို့၊ ကျုပ်တို့ဆရာ ဘုန်းကြီးနဲ့တကွ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက လမ်းခွဲလဲတွေ့အောင်၊ ဒီဘ၀YOUTUBE သေပြန်လို့ရှိရင်လဲ မကြောက်ဘဲနဲ့ သေရင်ကိစ္စပြီးပုံကို ဟောလိုပြော လိုလို့ ဒီတရားကို အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဋ္ဌိတော်က စ,လာတာ (မှန်လှပါဘုရား)။ဒီ ဒကာဒကာမ တွေမှာဘယ်အခြေအနေ ရောက်အောင် စခန်းပေါက်အောင် လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဖြင့် မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဘက်ကိုသေချာသက် ရောက်အောင်လို့ ဦးလှဘူးSTEEMITရဲ`့ပြောရတာ. (မှန်လှပါဘုရား)။ဒါကြောင့်ဒကာဒကာမတို့ယနေ့တရားကိုဖြင့် သြော် .့ သည်ကားဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် ဒီလမ်းတော့သွားနေတာပဲ၊ မကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့သွားရ အောင်၊ တို့သည်ကားဆိုရင်ဘယ်ဟာ လက်ကိုင်ထားမှသာလျှင် မကြောက်တဲ့အဖြစ်သို့ ရောက်မယ်၊ ကြောက်တဲ့အဖြစ်သို့ရောက်ရင်ဖြင့် ဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. (ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား)။
အဲဒါကြောင့် ဒကာဒကာမတွေဒီလမ်းလွတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီတရားပွဲ ဟောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကအစ နာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံး ဘယ်သူကမလွတ်ပါဘူး(မှန်လှပါဘုရား)။လွတ်ပါ့မလား (မလွတ်ပါဘုရား) အဲဒီမလွတ်တာတွေ သိပြီးသကာလနေ တော့ သြော် .ကြောက်သေ၊ မကြောက်သေဖြင့် ခွဲကြဦးစို့ .(မှန်လှပါဘုရား)။ဒါဖြင့် ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ ကာဒကာမတို့ ဘယ်လိုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှ ကြောက်ပါသတုန်းဆိုရင်ဘုရားက လေးမျိုး ထုတ်ပြတယ် .. (မှန်လှပါဘုရား)။ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့ ပုဏ္ဏားတဲ့ ကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်7+TVက လေးမျိုး ရှိတယ်ကွ .(မှန်လှပါဘုရား) ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က (လေးမျိုးရှိပါတယ်) မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က..(လေးမျိုးရှိပါတ ယ်)။လေးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ တို့သည်ကားလို့ ဆိုလို့ရှိရင် မကြောက်တဲ့ လေးမျိုး တဲ့ အပါယူမယ်ဟ,ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားကြပါ . (မှန်လှပါဘုရား)။မကြောက်တဲ့ လေးမျိုးထဲကို တို့အပါအ၀င် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကိုဖြင့်အားလုံးတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေ အရယူမယ်ဆိုတာဖြင့် ဒီနေ့စိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနား မွေးရမှာပဲ ..(မှန်လှပါဘုရား)။
မမွေးရင် မဖြစ်ပါဘူးဒကာကြွယ်ရ . (မှန်လှပါ) သွားရမယ့်လမ်းကြီးကြောက် နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်မှာသာလျှင် လားရာဂတိ ကောင်းနိုင်ပါ့မလဲ ..(မကောင်းနိုင်ပါဘုရား)။မကြောက်ဘဲနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဂတိရှိ ရင်လဲဂတိကောင်းပါလိမ့် မယ် (မှန်လှပါ ဘုရား) ဂတိမရှိတော့လို့ ရှိရင်လဲငြိမ်းချမ်း ပါလိမ့်မယ် .. (မှန်လှပါဘုရား) မဆိုနိုင်ဘူး လား (ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရား)။အေး..ဒါကြောင့် ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုးဒကာသိုက်ရေ .ရှေ့ပိုင်းက ထုတ်ပြမယ် (မှန်လှပါဘုရား) ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုးဆိုတဲ့ ဥစ္စာသည် စတုက္ကနိပါတ်အင်္ဂု တ္တိုရ်က လေးမျိုးပဲပြတယ် ..(မှန်လှပါဘုရား)။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တယ်ဆိုတာတစ် နံပါတ်မှတ်ပါတော့ဒကာဒကာမတို့။၁။ ။သားသမီးနှCHANNEL9င့်ပစ္စည်း အာရုံ ဒါတွေကို ခင် တွယ်ပြီး သကာလနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သေခါနီး ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာရောက်လာလို့ ရှိရင်ဖြင့် သြော်..(မှန်လှပါဘုရား)။ဒီရှာထားတဲ့ပစ္စည်း ဤမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေဖြင့် အစွန့်ကြီး စွန့်ပြီး အခွဲကြီးခွဲရတော့မှာပဲ ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာသေချင်တဲ့စိတ်က ရှိရဲ့လား (မရှိပါဘုရား) သေရမှာမကြောက်ပေ ဘူးလား.(ကြောက်ပါတယ်ဘုရာုး)။
သြော်သူ့ကြောက်စိတ်သည်ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ပေါ်ပါလိမ့်မတုံးတဲ့ လက်သည်ရှာတော့၊ သား သမီးနဲ့ ပစ္စည်းမစွန့်ချင်တဲ့၊ သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းကို မစွန့်ချင်တဲ့ သဘောတွေက သူ့မှာများပြီးသ ကာလ နေတဲ့အတွက် ဝေဒနာပြင်းထန်လာ ပြီ ဆိုမှဖြင့် ဒကာဒကာမတို့ သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်လာတာပဲ (မှန်လှပါဘုရား)။ကြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဒေါမနဿ ဖြစ်တယ်.(မှန်လှပါ) ဒေါမနဿဖြစ်တော့ ဒကာ ဒကာမတွေဘုန်းကြီးက ဟောထားတယ်နော်. ။သေခါနီးရောက်လာေ တာ့ ဒေါသဆိုတာမလာပေ ဘူးလား.(လာပါတယ်ဘုရား)။ဒါဖြင့် ဒေါသတစ်နံပါတ်လာတော့ ဦးလှဘူးရေ သောက နောက်ကလိုက်လာတယ်၊ (လိုက်လာပါ တယ်ဘုရား) သောက လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပရိ ဒေ၀ဆိုတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ….(ပေါ်လာပါ တယ်ဘုရား)။အင်း.ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်းတွေ ရော..(ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား) ဒါတွေပေါ်မလာဘူး လား(ပေါ်လာပါတယ်ဘုရား)။အင်းဒီပုCHANNEL 7ဂ္ဂိုလ်ကဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ပေါ်လာပါလိမ့် မလဲလို့ မေးလို့ရှိရင်ဖြ င့် မရဏမ္ပိ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ ဥစ္စာသည် အင်း..ဒါမသိလို့ဘဲဗျ.(မှန်လှပါဘုရား) မသိလို့ ခုနင်က သားသမီးနဲ့ ပစ္စည်းအာရုံတွေဟာအင်း ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲ၊ ဒီဥစ္စာတွေဟာဒုက္ခအစစ် တွေပဲဆိုတာမသိလို့ခင်ရှာသကိုးဗျ. (မှန်လှပါ)။
မသိလို့ခင်တွယ်တဲ့အတွက် ဝေဒနာက ပြင်းထန် လာတော့အင်းဒါတွေအတွက်အင်း ဒုက္ခဖြစ်လို့ ဒေါမနဿတွေဖြစ်လို့သောကတွေဖြစ်လို့ ပရိဒေ၀ ဖြစ်လို့ဒီလိုမနေပေဘူးလား..(နေပါတယ်ဘုရား) ဒီလိုနေပြီးသကာလ ဒကာဒကာမတွေဒီပုဂ္ဂိုလ် ဟာတဲ့ စုတေစိတ်ကျ သွားတယ်ဆိုကြစို့ . (မှန်လှပါဘုရား) စုတေစိတ်ဒီဘက်မကျပေဘူး လား..(ကျပါတယ်ား)။
ဒီဘက် ဒုက္ခဒေါမနဿသောကပရိဒေ၀ ဥပါယာ သတွေ မလာပေဘူးလား.(လာပါတယ်ဘုရား)။စုတေစိတ် ကျသွားတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာ အင်း..သားသမီးတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒုက္ခ သစ္စာတွေပါလား၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တတွေပါ လား၊ ဒုက္ခသစ္စာအစစ်တွေပါလားလို့သူ့စိတ် ထဲမှာသိလို့ သောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခဒေါမနဿ လာတာလား၊ မသိလို့ လာတာလား .(မသိလို့လာတာပါဘုရား)။မသိလို့ လာတော့ ဒီသောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿတွေထဲမှာအ၀ိဇ္ဇာကလာတယ် ..(လာပါတယ်ဘုရား) မလာပေဘူးလား ..(လာပါတယ်ဘုရား)။အ၀ိဇ္ဇာကလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ စုတေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် သူသည်ကားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သCHANNEL 5plusတုံးဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် သောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခဒေါမနဿ တွေ ကလာတဲ့အခါကျတော့ အ၀ိဇ္ဇာကပါ တယ်၊ အ၀ိဇ္ဇာပါတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာကာယ ကံ ၀စီကံတွေနဲ့ ဟိုပြောဒီမှာ၊ ဆိုတာတွေ ကမလာပေဘူးလား (လာပါတယ်ဘုရား)။အဲဒါသည်ကာယကံ၊ ၀စီကံတွေက လာပြန် တော့ ဒီကံတွေကလဲ ယခုဘ၀ကံတွေ ဖြစ် နေတယ်..(မှန်လှပါ) ကံတွေဖြစ်ပြီး သကာ လနေတော့စုတေစိတ်လဲကျပါရော၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဘက်မှာ၊ အင်း .. သားသမီးနဲ့ ပစ္စည်းစွဲတဲ့ ပြိတ္တာပဋိသန္ဓေမနေရပေဘူးလား. (နေရပါတယ်ဘုရား)။
အင်း.ပြိတ္တာပဋိသန္ဓေနေရတာသေခါနီး မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် နေတယ်. (မှန်လှပါဘုရား)။
သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းကို ခွဲရမှာသူတို့နဲ့ ကွဲရ မှာသူတို့နဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အဖြစ်ကြုံရမှာ၊ ဒါတွေကိုကြောက်ပြီးသကာလ လာတဲ့ အSTEEMITတွက်တဲ့ ဒကာဒကာမတို့ စုတေစိတ် ကျပြီး ပြိတ္တာဘက်ကူးသွားတယ် (မှန်လှပါ)။ဒါဖြင့် ကြောက်သေသေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက် ကူးသွားသလဲ (ပြိတ္တာဘက်ကူးသွားပါတယ် ဘုရား) ပြိတ္တာဘက်ကူးသွားတော့ ပြိတ္တာဇာတိ ဆိုတာ မလာပေဘူးလား.(လာပါတယ်ဘုရား)။စုတေပြီးတော့ ပဋိသန္ဓေဆိုတာလာရတော့မယ် ..(လာရမှာပါဘုရား) မလာပေဘူးလား (လာပါတယ်ဘုရား) အင်း.သူ့ကြောက်လုံး ဘာကြောင့် လာပါလိမ့်မတုံးဆိုတာ မေးခွန်း သာ ထုတ်ကြပါတော့။သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမစွန့်နိုင်လို့ ၊ ဝေဒနာ ကလဲ ပြင်းထန်လာတယ်၊ သားသမီးနဲ့ ပစ္စည်းလဲ မစွန့်နိုင်ဖြစ်လာတယ်၊ အဲဒီတော့ သေရမှာ ကြောက်လာတယ် (ကြောက်ပါတယ်)။ကြောက်တော့ သောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမန ဿတွေက လာရော၊ လာတဲ့အခါFACEBOOKကျလို့ရှိရင် ကာယကံဝစီကံမှားတွေနဲ့ မနေရပေဘူးလား .(နေရပါတယ်) နေတော့ ကမ္မဘ၀ ပစ္စယာ ပြိတ္တာဇာတိ မလာပေဘူးလား.(လာပါတယ် ဘုရား) သဘောကျပလား ..(ကျပါတယ်ဘုရား) အင်းကြောက်သေတယ် ဆိုးပါလား .(ဆိုးပါတယ်ဘုရား)ရှင်းပလား (ရှင်းပါတယ်ဘုရား)။
ကြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒကာဒကာမတို့ သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းအာရုံတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်၊ ဝေဒနာက ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတော့ ကြောက်ရှာတာပဲ .(ကြောက်ပါတယ်ဘုရား)။ကြောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် သောကပရိ ဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿမလာပေဘူးလား .(လာပါတယ်ဘုရား)။အဲဒီလိုလာတော့ ကာယကံ ၀စီကံတွေက ကောင်းသေးရဲ.လား.(မကောင်းပါဘူးဘုရား) မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ ဒီကံMYANMAR နဲ့သေသွားတဲ့ ကမ္မဘ၀ ပစ္စယာပြိတ္တာဇာတိဖြစ်သွားတယ် (မှန်လှပါဘုရား)။အဲဒီတော့အကျဉ်းချုပ်မှတ် စရာကတော့ သား သမီးနဲ့ ပစ္စည်းအာရုံတွေကိုခင်ပြီးသကာလ နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ၀ိပဿနာဥာဏ်ကမရောက်၊ သစ္စဥာဏ်တွေက မရောက်တော့ဒီဥစ္စာခိုင်တယ် မြဲတယ် ထင်ပြီးသကာလ နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေက ၀င်ပြီး သကာလနဂိုကထားပြန်တော့ဒီဒိဋ္ဌိကမခွာခဲ့၊ ထို ကဲ့သို့ မခွာခဲ့တဲ့အတွက် ဒီဒကာဒကာမ သေတဲ့အခါ ကျလို့ရှိရင် ကြောက်စိတ် လာပါတယ်၊ ကြောက်စိတ် လာတော့ဝေဒနာပြင်းထန်လို့ကြောက်စိတ်လာတော့၊ ကြောက်စိတ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ သောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿပါပဲ(မှMEDIAန်လှပါဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါတယ်ဘုရား)။ဒါဖြင့် သောကပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿတည်းဟူ သောတရားတွေနဲ့ ၊ သူ့ကာယကံ ၀စီကံတွေနဲ့ မှာ တန်တာမှာ၊ ပြောတန်တာပြော၊ ဆိုတန်တာဆိုတွေ ဟာ အကောင်းဟုတ်သေးရဲ့လား…..(အကောင်း မဟုတ်ပါဘုရား) ခင်ပြောမင်ပြောတွေဖြစ်မ နေဘူး လား. (ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား)။
အဲဒီတွင် ကာယကံ,၀စီကံတွေက အကုသိုလ်ကံတွေ ဖြစ်နေတော့ကမ္မဘ၀ပစ္စယာဒီအိမ်မှာပဲပြိတ္တာဇာတိ လာဖြစ်တယ် (ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား)ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းသလဲ(ကောင်းပါတယ်ဘုရား)။အင်း…..ဒီဥစ္စာအကျဉ်းချု ပ်မှတ်လိုက်တော့ သား သမီးနဲ့ ပစ္စည်းခင်တွယ်တဲ့သဘောကြောင့်ကြောက် ပြီးသကာလ သေတာတဲ့၊ ဒီလို ခင်တွယ်မှုရှိရင် ကြောက်တယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါ။ဒါ တစ်နံပါတ် ပုဂ္ဂိုလ်.(မှန်လှပါဘုရား)။၂။နှစ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘုရားဟောဦးမယ်ပုဏ္ဏား တဲ့၊ မှတ်ထားတဲ့။မိမိကိုယ်ကိုခင်တွယ်ပြီးသကာလ နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ လဲ သေခါနီးကျတော့ကိုဒီကိုယ်ကြိးနဲ့ ခွဲရတော့မယ်၊ ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့် အိုးစားကွဲရတော့မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကြောက်လာတာပဲ (မှန်လှပါ)။အနတ္တကိုအတ္တထင်တာကိုးဗျ(မှန်လှပါ) အဲဒီလို ကြောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်DAILY လဲတဲ့မိမိကိုယ်ကို မိမိခင် တွယ်ပြီး သကာလ နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲ ဝေဒနာတွေက ပြင်းထန်ပြီးသေပေါက်,သေ၀သို့ ရောက်တဲ့အခါ ကြောက်ပါတယ်ကွ တဲ့။ဒါဖြင့် မိမိကိုယ်ခင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လဲ ကြောက်သေပဲ . (မှန်လှပါဘုရား) ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲ (နှစ်ယောက်ရှိပါပြီဘုရား)။သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းခင်တွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော (ကြောက်သေပါဘုရား) ကြောက်သေ တစ် ယောက်ပဲ (မှန်လှပါ)။
အင်း.မိမိခန္ဓာခင်တွယ်ပြီး သေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရော (ကြောက်သေတစ်ယောက်ပါဘုရား) နှစ်ယောက် ရှိသွားပြီ (မှန်လှပါ)။၃။တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်က ဒကာဒကာမတွေမှတ်စရာ ကကိုယ်က လောဘနဲ့ ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ ရောင်း လိုက် ၀ယ်လိုက်အကုသိုလ်အလုပ်တွေက များပြီး သကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲ အခုလို ၀ိပဿနာ အလုပ်တွေ ခန္ဓာကို ဥာဏ်ရောက်ပြီးသကာလ အဖြစ်အပျက် အနိစ္စလက္ခဏာ၊ အနတ္တလက္ခဏာ တွေကို မရှုမပွားဘဲနေတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှု တွေက အကုန်ဆိတ်သုဉ်းေ နတော့တယ် (မှန်လှပါ ဘုရား)။ထိုကဲ့သို့ ဆိတ်သုဉ်းနေတော့လဲ သေခါနီးကျလာ တော့ ရောဂါဝေဒနာကပြင်းပြတဲ့အခါ သြော် ..ငါနှယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေ မလုပ်ခဲ့ ပါလား၊ အလကား အလုပ်တွေနဲ့၊ အကုသိုလ်အလုပ် တွေနဲ့သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးGOOGLE ပွားရေးနဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့ ပါလား၊ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ ကုသိုလ် ၀ိပဿနာအလုပ် ကြီးတွေတော့ငါလက်လွတ်ပြီးသကာလ၊ ဒါတွေ ဖြည်း ဖြည်းမှ ထားပြီးသကာလအရေးမကြီးမှာအရေးကြီး ပြီးသကာလ ငါ့နခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ ငါတော့ဖြင့် ကိုယ် ကျိုးနည်းတာပဲဆိုပြီးကိုယ်ပြုထားတဲ့ အကုသိုလ်တွေ ကရှိလို့လဲကြောက်ပြီးသေတယ်ကွ. (မှန်လှပါဘုရား)။ဘယ်နှယောက် ရှိသွားပြီလ (သုံးယောက်ရှိသွားပါပြီ ဘုရား) အဲ. ကိုယ်ပြုထားတဲ့ အကုသိုလ်တွေကို ကိုယ် ဟာကိုယ်အောက်မေ့ပြီးသကာလအလကားနေတာ တွေ၊ သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ အချိန်ကုန်တာ တွေ၊ မင်းရေးစိုးရေးနဲ့အချိန်ကုန်တာတွေ၊ အသက်တမ်း အလကား ဖြုန်းခဲ့တာတွေေ ပါ့ဗျာ၊ အဲဒါတွေကို တွေးလာ ပြန်လို့ရှိရင်လဲတဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဦးလှဘူးတို့၊ ဒကာကြွယ် တို့ ကြောက်ပြီးသေတယ်ကွ (မှန်လှပါဘုရား) ရှင်းပြီ လား..(ရှင်းပါတယ်ဘုရား) ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲ ..(သုံးယောက်ရှိပါပြီဘုရား)။
AUTHOR : @babysister
steemit steem steemcoin esteem media